Tutorials - Creativos Online | Creativos Online (Pejy 2)
Ahoana ny fomba fanaovana mockup ao amin'ny Photoshop
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny fomba fanaovanaeso amin'ny Photoshop ary hianaranao ireo teknika azo ampiharina amin'ny karazana zavatra rehetra. Aza hadino izany!
Ahoana ny fametrahana ny fironana frantsay amin'ny teny
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ny fomba fametrahana ny fironana frantsay amin'ny Word, tsikelikely ary ampifanaraho amin'ny Mac sy Windows ny fizotrany. Aza hadino izany!
Ahoana ny fomba hanaovana ny effets watercolor amin'ny Photoshop
Amin'ity lesona fampianarana ity dia hampianariko ianao ny fomba hanaovana ny vokarin'ny watercolor amin'ny Photoshop. Tsotra be izany ary toa tsara. Vakio ny lahatsoratra ary andramo!
Ahoana ny fomba hanaovana ny sary amin'ny Photoshop
Amin'ity fampianarana ity dia lazainay aminao ny fomba fanovana sary ho fanaovana sary pensilihazo. Vakio ny lahatsoratra raha te hahalala ny fomba hanaovana ny sary amin'ny Photoshop.
Raha mila mametaka PDF ianao ary tsy fantatrao ny fomba anaovany azy, eto dia manome anao programa sy tranokala vitsivitsy ahafahanao manao izany mora sy segondra.
Ahoana ny fomba hidirana na hidirana PDF an-tserasera
Manana PDF maromaro ve ianao ary mila mametraka pdf miaraka? Tsy hainao ve ny manao azy? Manome anao ny lakilen'ny programa sy Internet izahay hahafahanao mahazo azy
Te hianatra mamadika loko amin'ny Photoshop ve ianao? Topazo maso ny zavatra nomaninay ho anao hianaranao ny fomba hanaovana izany mora.
Ahoana ny fiasan'ny sosona amin'ny Photoshop
Amin'ity lesona ity dia holazainay aminao hoe inona ireo sosona sy ny fomba fiasan'izy ireo ao amin'ny Photoshop, tsikelikely ary tsy misy fahasarotana. Aza hadino izany!
Ahoana ny fomba fandokoana sary roa amin'ny Adobe Photoshop
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny fomba fampitahanao ny lokon'ny sary roa amin'ny Photoshop amin'ny tetika tsotra sy mahomby. Aza hadino izany!
Fantatrao ve ny grunge grunge? Fantaro ary fantaro hoe inona avy ireo dingana hamoronana iray amin'ny Photoshop na amin'ny fanovana sary.
Ato amin'ity lesona Canva ity dia asehoko anao ny fomba hamoronana sora-baventy mamorona sy mahasarika ny maso amin'ny fantsonao YouTube. Aza hadino ity lahatsoratra ity!
Maherin'ny 35 plugins sy sivana Photoshop maimaim-poana
Ianao ve mila sivana ho an'ny Photoshop na plugins? Aza adino ity lisitr'ireo add-on maimaimpoana ho an'ny programa Adobe ity izay azo antoka fa mahasoa anao.
Fomba fampiharana sivana marani-tsaina amin'ny Photoshop
Ny sivana marani-tsaina ao amin'ny Photoshop dia tena ilaina amin'ny fanovana fanovana azo ovaina amin'ny sarinao. Ianaro ny fampiasana azy!
Ahoana ny fomba malama amin'ny Photoshop
Te hahafantatra ny fomba malama amin'ny Photoshop ve ianao? Jereo hoe ahoana no hanaovana azy amin'ny fandaharana tsikelikely mba ho tsara kokoa ny sarinao.
Ahoana ny fomba fanaovana sary famantarana
Fantaro ny fomba fanaovana sary famantarana sy ny lafiny tsy maintsy anamafisanao indrindra mba ny tetikadinao no tsara indrindra ho an'ny mpanjifanao.
Ahoana ny fametrahana horonan-tsary ao amin'ny PowerPoint anao
Amin'ity lesona ity dia asehonay aminao ny fomba fametrahana horonan-tsary ao amin'ny PowerPoint, asehonay anao ny fomba maro hanatanterahana izany. Vakio ny paositra hahalalanao bebe kokoa!
Ahoana ny fambolena sary amin'ny Photoshop, mora sy haingana
Hatsarao ny famolavolana ny sarinao amin'ny famakiana ity lahatsoratra ity izay ampisehoanay anao ny fomba famolavolana sary ao amin'ny Photoshop. Aza hadino izany!
Modely diploma 37 maimaim-poana
Modely diploma maimaim-poana 37 hanomezana diplaoma amin'ny taranja, fankalazana na fotoana hafa. Sintomy izy ireo!
Ny effets photoshop dia ampiasaina hanovana sary na fanoharana mba hitovizany amin'ny endrika hafa. Fa ahoana no hanaovana azy ireo?
Ahoana ny fomba hanovana sary JPG ho PNG
Raha mila manova sary JPG ho PNG ianao dia misy safidy samihafa hahatratrarana azy. Jereo hoe iza amin'ireo no tena maharesy lahatra anao.
Ahoana ny fomba malama ny Photoshop ary manatsara ny safidinao
Amin'ity lesona ity dia mampianatra anao tetika tena tsotra izahay hanalefaka ny sisiny ao amin'ny Photoshop ary hanatsara ny safidinao. Aza hadino izany!
Ny fanovana ny pdf ho jpg dia tena tsotra. Tsy hoe satria afaka mampiasa programa ianao, fa koa satria misy fitaovana bebe kokoa. Jereo izy ireo!
Amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba pixelate ampahany amin'ny sary ao amin'ny Adobe Photoshop, haingana sy mora. Aza hadino izany!
Misy fomba fanesorana ny mari-drano amin'ny sary amin'ny Photoshop. Tohizo ny famakiana ilay lahatsoratra mba hianaranao ny fomba fanaovana azy tsikelikely!
Amin'ity lesona ity dia hasehoko anao ny fitaovana Illustrator fototra ho an'ny famolavolana logo. Tsy azonao hadino ity lahatsoratra ity!
Inona ny atao hoe Adobe Camera RAW Super Resolution: Avadiho ho 4K ny sary FullHD
Ny famahana Super dia mamela ny sary avy amin'ny 10MP ka hatramin'ny 40MP tsy misy fatiantoka antsipirihany ho lehibe kokoa voalohany amin'ny Adobe.
Ahoana ny fomba malama ny hoditra amin'ny Photoshop
Amin'ity lesona ity dia holazaiko aminao ny fomba fanatsarana ny hoditra amin'ny Photoshop nefa tsy latsaka ao anatin'ny valiny artifisialy loatra. Tohizo ny famakiana ny lahatsoratra!
Trello: lesona hifehezana ny fitaovana
Jereo avy amin'i Trello fampianarana izay ahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ity programa ity sy ireo tetika afaka manampy anao hihatsara.
Raha te hahafantatra ny fomba famadihana ny lokon'ny sary ao amin'ny Photoshop ianao na ny fomba famoronana sary ratsy dia aza atsahatra ny famakiana ity lahatsoratra ity!
Androany noho ny namako iray amin'ny bilaogy dia nahita ny kinova Corel Draw X5 azo sintonina maimaim-poana aho.
Te hahafantatra ny fomba hanaovana famelabelarana amin'ny PowerPoint ve ianao? Aza adino ity lahatsoratra hanehoanay anao ny fitaovana amin'ny programa ity.
Fomba fanaovana sary maimaimpoana amin'ny Word ary manampy fanoharana amin'ny rakitrao
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantariko anao ireo fitaovana fanaovana sary lehibe atolotry ny Word. Vakio sy manomboka manararaotra ilay programa!
Ovao ny loko ambadika sary iray ao amin'ny Adobe Photoshop
Amin'ity lesona ity dia lazainay aminao ny fomba ahafahanao manova ny lokon'ny sary amin'ny alàlan'ny Photoshop Vakio ny lahatsoratra hahalalanao an'ity fika ity!
Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano amin'ny Photoshop
Amin'ity fampianarana ity dia hampianarinay ianao hamorona mari-drano ao amin'ny Photoshop miaraka amin'ny sary famantarana na marikao, amin'ny fomba tsotra.
Ahoana ny fanovana ny loko amin'ny Adobe Photoshop haingana sy mora
Te hianatra hanova ny loko amin'ny Photoshop ve ianao? Ampidiro ity lahatsoratra ity ary ianaro fika mba hanamorana azy sy haingana.
Ahoana ny fomba famoronana fampisehoana manintona kokoa miaraka amin'i Canva
Amin'ity lahatsoratra androany ity dia hampianariko anao ny fomba famoronana fampisehoana mahafinaritra miaraka amin'i Canva ary hanome anao torohevitra vitsivitsy hanatsarana ny endrikao.
Mamorona karatra fandraharahana
Manampy anao izahay amin'ny famoronana karatra fandraharahana. Ianaro ny fomba hahazoana ny endrika tsara indrindra hahagaga ny hafa.
Ahoana ny fomba hamoronana sary PNG amin'ny Photoshop
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianariko anao ny fomba fanovana sary ho endrika PNG ary hampidirako tutorial tsotra hamoronana sary PNG miaraka amin'ny Photoshop tsy misy ambadika.
Ahoana ny fomba hamoronana lahatsoratra neon amin'ny dingana 5 amin'ny Adobe Photoshop
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-hamerina kilasika amin'ny taona 80 aho. Hasehoko anao ny fomba hamoronana lahatsoratra neon tena misy amin'ny Adobe Photoshop amin'ny dingana 5 mora.
Ahoana ny fomba famolavolana T-shirt amin'ny Adobe Photoshop
Ahoana ny fomba famolavolana t-shirt amin'ny Adobe Photoshop sy ny mockups hahazoana ny endrika ara-batana azonao amin'ny fanohanana akaiky ny zava-misy.
Jereo ny fomba fanondranana rakitra ao amin'ny Adobe Illustrator amin'ny fomba matihanina, hahatratrarana ny fanondranana ireo rakitrao miaraka.
Amin'ity lesona ity dia holazainay aminao ny fomba fiasan'ny sosona sy ny vondrona ao amin'ny Adobe Photoshop, tsikelikely ary tsy misy fahasarotana. Aza hadino izany!
Ahoana ny fanomanana ny fisie varnish UVI ao amin'ny Photoshop
Ampidiro ary fantaro ny fomba fanomanana ny fisie varnish UVI ao amin'ny Photoshop haingana hahazoana ny volavolanao vita pirinty miaraka amin'ny taratry ny famirapiratana.
Ny Thyssen Museum dia manome làlana an-tserasera maimaimpoana: «Jiro sy loko amin'ny hosodoko. Ny angano an'i Venise »
Fianarana tsy manam-paharoa hianarana bebe kokoa momba ny sary hosodoko klasika avy amin'ny iray amin'ireo tranombakoka manan-danja indrindra eto an-tany, ny Thyssen Museum.
Ahoana ny fanodikodinana ny tany misy sary ao amin'ny Photoshop
Raha mila halalin'ny sary bebe kokoa ianao, izany hoe hanitatra ny gorodona sy ny rindrina hifanaraka amin'ny volavolanao, aza matahotra fa hasehonay anao ny fomba. Nanomboka izahay!
Ahoana ny fanovana horonantsary ao amin'ny Photoshop
Vakianao izany marina, ity fitaovana ity dia tsy mamela antsika hanitsy sary fotsiny. Izy io dia manana safidy maro tsy maintsy hitanao. Amboary ny horonan-tsarinao!
Ahoana ny fanisiana tombo-kase logo amin'ny alàlan'ny Photoshop
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao dia nahita sarin'ireo logo voahidy tamin'ny hazo. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy ireo amin'ny Photoshop tsikelikely.
Mpaninjara miaraka amin'ny volavolanay: ampifanaraho ary zarao
Mianara fika sasany mba hahalalanao tsara kokoa ny elanelam-potoana. Zava-dehibe ny mifototra sy mifono boaty ny zava-drehetra.
Mamolavola sy mamoaka boky mampiasa Amazon KDP
Amazon KDP dia sehatra famoahana sy fivarotana boky. Ianaro ny momba ireo fitaovana arosony sy ny fomba ahafahanao miatrika famolavolana sy fanovana eo amin'ny lampihazo.
Ahoana ny fandefasana ny tsinain'ny boky iray hanery
Raha handefa ny tsinain'ny boky iray hanery anao dia tsy maintsy dinihinao ny andiana fiheverana rehefa mitahiry azy. Eto izahay no hanazava aminao ny fomba hanaovana izany.
Fomba fanamboarana fonony boky halefa hanonta
Ahoana ny fomba tokony handrindranao ny fonon'ny boky hanaovana pirinty? Azavao amin'ny fomba tsotra ny dingana rehetra hahafahanao manana kanto farany tsy misy hadisoana.
Ahoana ny fomba fampifanarahana ny lahatsoratry ny lahatsoratra amin'ny endrika sary
Amin'ity lesona tsotra ity dia hianaranao ny fomba fampifanarahana ny lahatsoratry ny lahatsoratra ho lasa sary iray hamoronana firindrana hita maso sy lahatsoratra manintona kokoa.
Mamorona zava-kanto pop amin'ny dingana vitsivitsy
Pop Art dia fomba malaza amin'ny famolavolana. Ianaro ny fomba hamoronana sary Pop Pop anao miaraka amin'ity fampianarana tsotra ity.
Ianaro ny fomba hamoronana ny vokatra Polaroid ao amin'ny InDesign
Ny vokatr'i Polaroid dia misy fanovana sary toa Polaroida marobe. Ianaro ny fomba fanaovana an'ity lesona ity.
Mamorona afisy miaraka amina voninkazo sy typografika
Ianaro ny fomba fanamboarana voninkazo ao amin'ny Adobe Illustrator, ity karazana endrika ity lamaody tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny mpamorona toa an'i Aless Baylis.
Miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy ity tranonkala ity dia afaka manafoana ny faran'ny sary ao anatin'ny segondra vitsy. Fahombiazana daholo.
Mianatra manao fanesoana ho an'ny tenantsika isika
Raha toa ka tsy mahasoa anao ireo fampidinana fampidinana dia azonao atao ny mampiasa ny sarinao manokana. Ampianarinay ianao hanodinkodina sary. Mamaky hatrany!
Mila mamorona afisy na afisy ve ianao? Tsy mila fahalalana be isika vao hamolavola endrika mahaliana, miloko ary mahomby. Mampianatra anao ny fomba hahazoana izany izahay.
Vokatry ny glitch misy dingana tsotra ao amin'ny Photoshop
Misy fomba maro hanatratrarana izany vokatra izany amin'ny alàlan'ny Photoshop. Amin'ity lesona ity dia hazavaiko ny fomba fampiharana ny vokan'ny glitch amin'ny fomba tsotra sy haingana.
Loko mety amin'ny sary amin'ny Photoshop
Amboary haingana ny lokon'ny sary amin'ny Photoshop, hahazoana sary milay izay hahazoana vokatra matihanina.
Ny fisafidianana solosaina finday dia asa sarotra, raha ho an'ny famolavolana sary aza. Ny fahalalana izay tokony hojerentsika dia tena zava-dehibe mba tsy hanao fahadisoana. Ahoana no tokony hisafidianana solosaina finday handrafetana? Jereo eto!
Voka-pifaliana amin'ny Photoshop hamoronana lohany bobble izay azonao ampiasaina amin'ny sarin'ireo mpianakavy sy namana rehetra izay tianao hiavaka amin'ny fikitika mahafinaritra. Mianara bebe kokoa momba ny Photoshop amin'ity vokatra mahafinaritra ity.
Fotografia vokarin'ny setroka amin'ny Photoshop izay hahafahanao manampy fikitika miavaka amin'ireo lahatsoratra rehetra mila izany. Mianara miasa amin'ny borosy Photoshop amin'ny fomba matihanina kokoa.
Vokarin'i Andy Warhol amin'ny Photoshop
Vokarin'i Andy Warhol miaraka amin'ny Photoshop haingana sy mora, mahasarika sary mahasarika fahitana noho ireo loko feno an'io vokatr'izany. Mianara bebe kokoa momba ny Photoshop amin'ity lahatsoratra ity.
Lisitry ny hevitra rehefa mamorona sary famantarana
Lisitry ny foto-kevitra rehefa mamorona sary famantarana mba hahazoana antoka fa mifampiresaka tsara amin'ny fomba matihanina sy mahomby ny sarin'orinasa. Alao sary an-tsaina ohatra kely azo ampiharina.
Saripika misy vokany maro loko amin'ny Photoshop
Sary mora sy haingana miaraka amin'ny vokatra maro loko amin'ny Photoshop, mahatratra vokatra tena manintona amin'ny ambaratonga hita maso noho ny tanjaky ny loko. Makà sary amin'ny endrika Alice tena madio amin'ny endrika Wonderland.
Fiantraikany lehibe amin'ny Photoshop haingana
Vokany avo lenta ao amin'ny Photoshop haingana sy mora hahazoana sary misongadina amin'ny fiangavian'izy ireo ny masony. Hahafehy ity vokatra mangatsiaka ity dia nampiasaina betsaka tamin'ny indostrian'ny sary lamaody.
Volavola azo idirana ho an'ny olona manana fahasembanana amin'ny fahitana
Ny fahasembanana eo amin'ny fahitana dia olana iray misy fiatraikany amin'ny olona 285 tapitrisa manerantany, ny famolavolana tranonkala mora azo dia manamora ny fiainana ho azy rehetra. Izany no antony tsy maintsy ampifanarahantsika aminy ny habaka. Eto izahay dia manana torolàlana vitsivitsy momba ny famolavolana ny tranonkalantsika sy ny fitaovana ho an'ireo mpampiasa.
Ahoana ny fomba hanaingoana sary
Te hahafantatra ny fomba hanamboarana sary miaraka amin'ny Illustrator ve ianao? Photoshop? Sa, angamba, mila ataonao an-tserasera ve izany? Hiezaka izahay hampiseho ny fomba samihafa anaovana azy amin'ny iray amin'ireo tontolo iainana ireo mba hanamorana ny asan'ny mpamorona
Ny fahasamihafana ara-nofo eo amin'ny Tracking sy Kerning
Ny fahasamihafana eo amin'ny typografika eo amin'ny Tracking sy Kerning sy ny fanodikodinany mba hahafantarany bebe kokoa ny fomba fiasan'ny typografia amin'ny fomba fijery teôlôjika ary hampiharana azy amin'ny fomba azo ampiharina amin'ny programa samihafa.
Ahoana ny fomba hamoronana marika nomerao amin'ny Indesign
Ahoana ny fomba hamoronana marika nomerao amin'ny Indesign hametrahana endrika matihanina ireo tetikasanay. Ny fampidirana ny fanisam-pejy dia zava-dehibe sy fototra, saingy azonao atao ve ny mandeha ho azy? Mianara miaraka amin'ity lahatsoratra ity.
Ny torolàlana farany amin'ny loko faharoa
Inona avy ireo loko voalohany? Ahoana no fomba namoronana azy ireo? Ny loko faharoa dia avy amin'ny toerana faharoa, avy amin'ny fifangaroan'ny ampahany mitovy amin'ny loko voalohany ary samy hafa arakaraka ny mason'ny pigmentation na hazavana, na inona ilay CMYK na RGB na ilay maodelin'ny RYB taloha. Jereo eto daholo ny momba azy ireo.
Ny torolàlana farany ho an'ny lokon'ny Kilonga
Inona avy ireo loko voalohany? Lazainay aminao daholo ny momba azy ireo ao amin'ny torolàlana mazava ho azy izay anehoanay anao izay loko mivoaka rehefa afangaro izy ireo, inona ny toetra ananany, ny kodiarana miloko, ny fomba fanaovana volontany amin'ny loko voalohany sy maro hafa!
Famolavolana afisy horonantsary: ​​The Sparrow Mena
Ny famolavolana afisy horonantsary dia tontolo famoronana iray manontolo izay toerana misy ny endrik'ilay mpamorona. Inona no ao ambadiky ny afisary? Ahoana no ahafahantsika mamorona afisy mitovy amin'ny Photoshop? Mianara tsikelikely amin'ny fomba famoronana afisy sarimihetsika amin'ny Photoshop.
Mamolavola sary dokam-barotra amin'ny Photoshop tsikelikely
Mamolavola sary dokam-barotra amin'ny Photoshop amin'ny fomba matihanina amin'ny fampiasana ny sasany amin'ireo fitaovana ilaina amin'ity programa famerenana nomerika nomerika ity. Mianara mampiasa Photoshop amin'ny fomba azo ampiharina tsikelikely.
Mianara mampiasa fitaovana penina Photoshop: Ny penina. Fitaovana sarotra sy be pitsiny izay hanome anao fahafaha-manao tsy manam-petra rehefa mamorona ny canvases anao.
Ahoana ny fanaovana sary Pixel Art Style Spaceship miaraka amin'ny Pixel Art Studio
Mampianatra anao hampiasa Pixel Art Studio izahay hamoronana sambon-danitra azonao ampiasaina amin'ny lalao ho an'ny finday.
Fetsy sy hitsin-dàlana Adobe Illustrator mety tsy fantatrao
Te hahafantatra ny fomba hampitomboana ny asanao ve ianao? Ireto misy tetika sy hitsin-dalan'ny Illustrator hahafahanao miasa amin'ny fomba mahomby kokoa
Miaraha milamina amin'ny Photoshop amin'ny famoronana vondrona sosona
Miasa amin'ny fomba milamina miaraka amin'ny Photoshop amin'ny famoronana vondrona sosona mamela anao hanangona sy hanafatra ny sosona rehetra ao amin'ny Photoshop.
Fomba fianarana manao sary
Ny fianarana manao sary dia miankina amin'ny ezaky ny olona iray hanaovana azy sy amin'ny faharetana sy fikirizana hitohizan'ny fivoaran'ny sary.
Mampianatra anao amin'ny horonan-tsary izahay ary tsikelikely ny fomba hanovana sary iray ho sary miaraka amin'ny Photoshop. . Hainao ve ny manao azy? Jereo miaraka amin'ny tutorial.
Ahoana ny fomba hamafana horonantsary amin'ny Adobe Premiere
Ahoana ny fomba hamoronana blur amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny Adobe Premiere hahatratrarana blaogy voafehy ao anatin'ireo sombin-tsarinay.
Androany isika dia hiresaka momba ny stamp clone, fomba haingana hanampiana na hanalana ireo singa amin'ny sary. Hainao ve ny mampiasa azy tsara?
Avadiho ho tsoroka ny lahatsoratra mba hialana amin'ny lesoka fanontana
Avadiho ho lasa curve ny lahatsoratra mba hialana amin'ny lesoka fanontana ary hiantohana fa tsy manana karazana hadisoana an-tsoratra ny tetikasanay sary.
Efa mba te hahafantatra ve ianao hoe manao ahoana ny toetranao amin'ny fahitalavitra na amin'ny sarimihetsika? Amin'ity lesona ity dia mampianatra anao izahay mba ho Hulk ...
Teknika manjavozavo matihanina amin'ny Photoshop
Teknika manjavozavo matihanina amin'ny Photoshop hanomezana famaranana matihanina kokoa ny sarinao rehetra. Mianara Photoshop tsikelikely.
Aloka antsasaky ny tarehy.
Ity tutorial ity dia hampianatra anao hanisy fiatraikany amin'ny endrika amin'ny aloka. Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny faritra hafa amin'ny vatana izay tianao hanahafana azy
Mahazoa tsiky tonga lafatra amin'ny Adobe Photoshop
Mahazoa tsiky tonga lafatra miaraka amin'ny Adobe Photoshop haingana sy mora, mitondra ny tsiky rehetra alainao sary.
Fanasongadinana loko miaraka amin'ny Photoshop.
Ho an'ny anio dia nitondra fampianarana manokana momba ny Halloween izahay, hampialohavanao ny lalao. Ampianarinay ianao hanome ny loko manasongadina ny lokon'ny volonao izay mifanandrify amin'ny tranga.
Retouching sary miendrika Zombie amin'ny Adobe Photoshop
Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano amin'ny Photohop
Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano miaraka amin'i Photohop haingana, hiarovana sy hanasongadinana ireo tetikasanao sary. Arovy ny sary-nao amin'ny plagiarism!
Ahoana ny fomba hanolorana karatra fandraharahana amin'ny mpanjifa
Ahoana ny fomba hanolorana karatra fandraharahana amin'ny mpanjifa amin'ny fomba famoronana mba hivarotana tsara kokoa ilay hevitra sy hahatratrarana vokatra matihanina kokoa.
Esory ireo boribory maizina sy teboka eo amin'ny hoditra amin'ny Photoshop
Esory ireo boribory maizina sy teboka mainty amin'ny hoditra miaraka amin'ny Photoshop haingana miaraka amin'ny valiny matihanina. Makà hoditra magazine amin'ny sarinao rehetra.
Fitaovana hisafidianana sary ao amin'ny Photoshop
Fitaovana hisafidianana sary ao amin'ny Photoshop amin'ny fomba matihanina mianatra manambatra ireo fitaovana arakaraka ny sary.
Ahoana ny faharetan'ny sary amin'ny Adobe Photoshop
Fomba ahoana no hametahana sary amin'ny Adobe Photoshop amin'ny dingana kely vitsivitsy mandra-pahatongantsika ny taonantsika ny sary misy valiny tena misy.
Ahoana ny fomba hanampiana ny vokatra bokeh amin'ny sary amin'ny Photoshop
Ampianarinay anao ny fomba hanampiana ny vokatra bokeh, izay lamaody amin'izao fotoana izao, amin'ny sary ao amin'ny Photoshop mba hamelana azy amin'ny famaranana tsara kokoa.
Famerenana sary haingana ny sary miaraka amin'ny Adobe Photoshop ho an'ireo olona rehetra te-hamerina hamerina hijery sary nefa tsy matihanina Photoshop.
Amin'ity fampianarana Photoshop ity dia hahazo vokatra pixelated pixelated avy amin'ny sary ianao, ary avy eo afaka mampiasa azy io ho lasa ambadika.
Ahoana ny fomba hampihenana lanja amin'ny Photoshop sy ny vokatra mahafinaritra hafa
Ahoana ny fomba hampihenana lanja amin'ny Photoshop sy ireo vokatra mahafinaritra hafa izay hahafahanao mahazo an'io vatana magazine io na sary mamorona sy mahafinaritra.
Ahoana ny fametrahana mari-drano ao amin'ny Photoshop
Fantatrao ve ny fomba fametrahana mari-drano ao amin'ny Photoshop? Raha te hiaro ny volavola isika dia tena ilaina ny mametraka mari-drano. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy.
Ahoana ny fambolena sary ao amin'ny Photoshop
Fantatrao ve ny fomba famokarana sary ao amin'ny Photoshop? Atorinay anao ny fomba fampiasana ny fitaovana cropping amin'ny tutorial video.
Hatsarao ny hatsaran'ny sary amin'ny Photoshop ireo sary rehetra izay tsapanao fa tsy manana fiainana sy maranitra ...
Ahoana ny fomba hanamaivanana ny nifin-tsary amin'ny Photoshop
Ahoana ny fomba hanamaivanana ny nify amin'ny sary miaraka amin'ny Photoshop hahazoana nify toy ny voahangy. Mianara teknika retouching sary matihanina.
Ahoana ny fandefasana sary famantarana amin'ny mpanjifa amin'ny fomba matihanina
Ahoana ny fandefasana sary famantarana amin'ny mpanjifa amin'ny fomba matihanina hahatratrarana vokatra iray izay mampiseho ny maha-matihanina antsika amin'ny endrika mpamorona sary.
Esory ny moles sy ny lesoka amin'ny hoditra amin'ny Adobe Photoshop
Ny fanesorana ny moles sy ny lesoka amin'ny hoditra amin'ny Adobe Photoshop dia fomba iray tsara hiasana amin'ny fomba fanaon'ny matihanina amin'ny sary sy ny famolavolana.
Ahoana ny fanahafana ny effets hafainganana amin'ny Photoshop
Ny fomba fanahafana ny effet hafainganana amin'ny Photoshop ho an'ny sarinao dia afaka manampy anao hahatratra fa mety mihetsika ny zavatra static.
Mamorona fifanakalozana horonan-tsary amin'ny Premiere mora foana
Mamorona fifanakalozana horonan-tsary miaraka amin'ny Premiere mora foana ao anatin'ny minitra iray monja noho ny interface intuitive azonao atao ny mamorona effets matihanina ho an'ny horonan-tsarinao.
Fehezo ny fotoanan'ny horonan-tsary amin'ny Adobe Premiere
Mora tokoa ny mifehy ny fotoanan'ny horonan-tsary amin'ny Adobe Premiere ary mahomby ny valiny. Mianara fanovana famoronana haingana.
Mamorona sary miaraka amin'ny fomban'i Andy Warhol miaraka amin'ny sarinay, mahazo sary mamorona sy manaitra amin'ny fomba tena tsotra.
Ahoana ny fomba hanaterana zavakanto farany amin'ny mpanjifa amin'ny fomba marina sy matihanina, hialana amin'ny lesoka mahazatra an'ny mpamorona zandriny tsirairay.
Ovao ny lokon'ny volo amin'ny Photoshop
Manova haingana ny lokon'ny volo amin'ny Photoshop mba hahafahanao manandrana fomba vaovao sy fomba manaitra tena mahaliana.
Teknika fandokoana sary amin'ny Photoshop
Teknika handokoana sary amin'ny Photoshop ary hamelomana ny sarinao amin'ny fomba matihanina sy tena ahazoana aina.
Ny famoronana photomontage misy zava-misy miaraka amin'ny Photoshop ho an'ny tetik'asa sary dia zava-dehibe tokoa raha mitady valiny mamorona sy am-boalohany ianao.
Mamorona crédit amin'ny Adobe Premiere ho an'ny tetikasanao audiovisual amin'ny fomba mora sy matihanina. Manampia mari-pankasitrahana amin'ny horonan-tsarinao amin'ny Premiere.
Mifantoha amin'ny Photoshop mba hampiavaka ny sary iray
Ny fomba fiasa iray miaraka amin'ny Photoshop hanasongadinana zavatra amin'ny sary dia fomba iray ampiasain'ny mpaka sary. Asongadino ireo faritra manan-danja amin'ny sarinao.
Saripika misy vokany amin'ny nofy ao amin'ny Photoshop misy vokatra tena manintona
Saripika misy vokany nofinofy ao amin'ny Photoshop miaraka amin'ny tanjon'ny fahazoana sary manintona miaraka amin'ny hatsarana kanto hita maso.
Mamorona tsoratadidy miaraka amin'ny InDesign
Ny famoronana tsoratadidy miaraka amin'i InDesign haingana sy mora dia azo atao noho ny fanamorana izay mamela antsika hiasa InDesign.
Alokaloka modely amin'ny zava-misy ary asongadino amin'ny Photoshop
Alokaloka sy jiro modely miaraka amin'ny Photoshop amin'ny fomba azo tanterahina ary hahatratrarana vokatra tsara kokoa amin'ny retouching-nao sary amin'ny fomba matihanina
Ahoana ny fomba hamoronana GIF mihetsika ao amin'ny Photoshop haingana sy mora
Ny fomba famoronana GIF mihetsiketsika ao amin'ny Photoshop haingana sy mora dia zavatra izay tsy olana intsony noho ny Photoshop sy ny fitaovan'ny horonantsary.
Mamolavola boaty araka ny tokony ho izy hahatratrarana mpihaino marobe
Ny famolavolana marina ny afisy hahatratra ny mpihaino lehibe kokoa dia tsy isalasalana fa ny tanjon'ny mpamorona tsirairay. Ianaro ny fomba hamoronana afisy izay tena miasa.
Ahoana ny fomba hahatratrarana ny vokatra an-tsary amin'ny dingana 8 fotsiny
Ny fakana sary tsotra sy fahazoana ny tantara an-tsary amin'ny alàlan'ny photoshop no zavatra mora indrindra azonao tratrarina noho ireo dingana 8 ireo.
Ahoana ny fomba hanaovana tetikasa fanontana amin'ny alàlan'ny pejy Master amin'ny Indesign
Ahoana ny fomba fanaovana endrika famoahana amin'ny pejy master ao Indesign handrafetana matihanina ny karazana tetikasa sary.
Avereno sary taloha miaraka amin'ny Photoshop hanome fiainana vaovao. Avereno amin'ny fomba mora ireo dingana taloha fahazaza ireo.
Mamorona hetsika ao amin'ny Photoshop mba hitsitsiana fotoana
Ny famoronana hetsika ao amin'ny Photoshop mba hitsitsiana fotoana amin'ny dingam-panovana dia hevitra tsara hampiharana ny retoucha mitovy amin'ny sary maro.
Jereo ny fomba fampiasana sivana ao amin'ny Photoshop amin'ity toro-lalana ity
Jereo ny fomba fampiasana sivana amin'ny photoshop miaraka amina fika kely toy ny fanafenana ny lafin-sary sasany na ny fanasongadinana azy ireo.
Adobe Premiere sy ny effets vidéo
Mpiara-miasa lehibe ny Adobe Premiere sy ny effets vidéo efa voafaritra mialoha raha ny fanovana horonantsary haingana sy mora foana. Horonan-tsary manintona miaraka amin'i Premiere.
Mianara manitsy ny tsy fahalavorariana amin'ny hoditra amin'ny photoshop haingana sy mora. Fantaro ireo teknika ampiasaina amin'ny doka sy ny lamaody.
Mitadiava loharano maimaimpoana maherin'ny 2500
Mitadiava loharanon-karena maimaimpoana maherin'ny 2500 ho an'ny mpamorona amin'ny sehatra rehetra toa ny photoshop na mpanao sary ary mahazoa fanjakana empirazy.
Fomba fampifangaroana: ny fomba hianarana ny fampiasana azy tsara
Fomba fampifangaroana Photoshop. Ianaro ny fomba fampiasana tsara ireo maody tsy fantatra 27 hahafantarana ny momba azy ireo alohan'ny hampiasana azy ireo tsy misy hatak'andro.
Mianara mamorona fanesoana amin'ny marikao
Ampianarinay hampiasa fanesoana amin'ny marikao ianao. Hahazo valiny mahasarika ianao ary ho hitanao raha miasa na tsia ny marika iray amin'ny mpanelanelana iray.
Saripika mainty sy fotsy ary miloko
Ianaro ny fomba hamoronana ny vokatry ny horonantsary Sin City amin'ny alàlan'ny fahazoana sary mainty sy fotsy sy miloko hanomezanao sary ny famoronana.
Photoshop Basic: Ahoana ny fomba hamafana ny ampahany amin'ny sary
Atorinay anao ny fomba hamafana ny ampahany amin'ny sary amin'ny Photoshop amin'ny fampiasana fitaovana tsotra sy ny borosy.
Fetsy Photoshop izay hanampy anao hanamboatra ny lesoka amin'ny sarinao
Mianara tetika maromaro haingana sy mora amin'ny alàlan'ny fitaovana famolavolana Photoshop ary avelao ho toy ny vaovao ny sarinao.
Cutpaste (teknika collage)
Azavainay ny teknikan'ny collage mba hahafahan'ny mpampiasa manao collage ho avy amin'ny fampiasana ny fitaovana Adobe Photoshop.
Torolàlana momba ny fampiasana Adobe Fuse
Mbola tsy hainao ny mampiasa Adobe Fuse? Midira eto ary tadiavo ity fampianarana mahafinaritra ity hamoronana litera 3D ary ho lasa manam-pahaizana.
Ahoana ny fomba famoronana borosy ao amin'ny Photoshop
Amin'ity lesona ity dia manazava dingana vitsivitsy tena tsotra izay tsy maintsy harahinao raha te-hamorona borosy Photoshop manokana ianao.
Ahoana ny fomba hamoronana karatra krismasy tsotra sy mahafinaritra amin'ny Fotojet
Fotojet dia fitaovana tranonkala maimaim-poana mamela anao hamorona karatra krismasy kanto sy tsara ao anatin'ny minitra vitsy.
Rehefa afaka 25 taona niaraka taminy, ny fikandrana "mamorona antontan-taratasy" taloha dia nifindra tamin'ny iray vaovao sy sarotra kokoa. Raha te hanana azy indray ianao dia hasehonay anao ny fomba.
Rotoscoping dia teknika fanentanana tsotra misy vokany tsy manam-paharoa. Mampianatra anao hampiasa fitaovana fototra indrindra izahay hanatanterahana an'io teknika io.
Ahoana ny fomba hamoronana lamina ao amin'ny Illustrator
Amin'ity fampianarana tsotra ity dia hianarantsika ny hanao maodely kalitao ao amin'ny Illustrator amin'ny dingana tsotra vitsivitsy, hahafahantsika manome fomba ny volavolaintsika.
Ahoana no hahalalana hoe firy megabytes ny sary amin'ny tranokala no milanja
Raha mampiasa Evernote ianao ary te-hitahiry tranokala iray hahafahana miditra ao amin'ity app ity dia hampianarinay ianao hahafantatra ny lanjany amin'ny sary
Mamorona sary famantarana tanana amin'ny Photoshop
Amin'ny dingana vitsivitsy monja dia azontsika atao ny mamadika ny sarisarin'ireo sary tànana nosoratanay ho lasa sary tena niomerika.
Vokatry ny watercolor ho an'ny lahatsoratra miaraka amin'ny Photoshop
Amin'ity vokatra watercolor ity dia afaka mahazo effet mafana sy manintona kokoa ary matihanina kokoa amin'ny lahatsoratray isika ary amin'ny dingana vitsivitsy monja.
Ahoana ny fampiharana ny vokatra Vintage amin'ny sary miaraka amin'ny Photoshop
Asehonay aminao ny fomba fampiharana an-tanana ny vokatra Vintage amin'ny sary rehetra tadiavinao amin'ny programa Adobe Photoshop CC
Ahoana ny fandokoana sary mainty sy fotsy amin'ny Photoshop
Fampianarana mivelatra izay handinihantsika ireo dingana rehetra horaisina handokoana sary mainty sy fotsy ao amin'ny Adobe Photoshop CC
Ahoana ny fanovana ny lokon'ny lahatsoratra amin'ny Adobe Photoshop
Fampianarana iray ahafahanao mianatra manova ny lokon'ny lahatsoratra amin'ny sary amin'ny Photoshop. Azonao atao koa ny misafidy litera aminy.
Ahoana ny fambolena sary amin'ny fomba mandroso ao amin'ny Photoshop
Izahay dia mamerina mijery ny antsipiriany rehetra ananan'ny fitaovana cropping ao amin'ny Adobe Photoshop hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'izany
Ahoana ny fomba fanesorana ny background avy amin'ny sary ao amin'ny Adobe Photoshop
Misy fitaovana maromaro hisafidianana ny mombamomba ny sary iray hamafana azy ary hampiditra iray vaovao ao amin'ny Adobe Photoshop.
Ahoana ny fomba hanovana loha amin'ny fomba mora amin'ny Photoshop CC
Ao amin'ny Adobe Photoshop CC, noho ny fitaovam-pandrefesana dia afaka manova loha amin'ny fomba tsotra sy mora ianao. Atorinay anao ny dingana manaraka
Photoshop: jiro sy aloka araka ny itiavanao ny "Overexpose" sy "Burn"
Fampianarana hianarana fifehezana ny fisongadinana sy ny aloka amin'ny fampiasana ny fitaovana "Dodge" sy "Burn"
Ahoana ny fomba hamoronana hetsika ataonao mandeha ho azy ao amin'ny Adobe Photoshop
Ao amin'ny Photoshop, afaka mamorona hitsin-dàlana ho an'ny hetsika mandeha ho azy ianao mba hitsitsiana fotoana amin'ny asa miverimberina.
Ahoana ny fisafidianana haingana amin'ny Photoshop
Ny fifehezana haingana ny safidy haingana ao amin'ny Adobe Photoshop dia hahafahantsika mandray ampahan'ny sary tiantsika hatao fanovana.
Ahoana no ahitanao ny loko mifanohitra tanteraka amin'ilay nofidinay
Hello Color dia fitaovana amin'ny Internet izay mora ampiasaina mba hahitana ny loko mifanohitra tanteraka amin'ilay nofidina ho an'ny asa.
Fampianarana: Ahoana ny fametrahana lay pejin-tranonkala amin'ny Adobe Photoshop
Ahoana no ahafahantsika manararaotra ny Adobe Photoshop hametraka ny pejinay amin'ny fomba matihanina? Amin'ity fampianarana ity dia hazavainay aminao izany!
Fomba tsara indrindra hamakiana sary ao amin'ny Adobe Photoshop
Ahoana ny fambolena sary amin'ny fomba matihanina 100% amin'ny Adobe Photoshop? Volo, hazo, faritra mangarahara ... Ianaro ny fomba fitrandrahana.
Tutorial video 10 ho an'ity Krismasy ity izay tsy azonao adino
Fisafidianana fampianarana video miisa folo amin'ity Krismasy ity izay hanampy anao hamolavola amin'ny Adobe Photoshop.
Fampianarana horonan-tsary 7 momba ny valin'ny lahatsoratra Krismasy izay tsy azonao adino
Horonan-tsary 7 tena mahaliana hianarana ny fomba fampiharana ny vokany amin'ny Krismasy. Mamaky hatrany!
44 ny vokatra tsara indrindra ho an'ny Adobe Photoshop 2015
Fisafidianana ny akora an-tsoratra karazana matihanina hiasa ao amin'ny Photoshop sy Illustrator.
Fandefasana horonantsary maimaim-poana amin'ny Adobe Dreamweaver CC
Mitady fampianarana video hanatsarana ny fahalalanao Dreamweaver CC?
10 fampianarana video momba ny psychedelic effets mahaliana XNUMX tena mahaliana
Ny fanangonana fampianarana video miisa folo tena mahaliana mba hampivelatra ny vokatra sy ny famoronana karazana psychedelic. Mamaky hatrany!
Kitapo infographic: Shortcuts Keyboard ho an'ny Adobe Suite ho an'ny Mac sy Windows
Fisafidianana infografika misy hitsin-dàlana fitendry ho an'ny suite Adobe (ho an'ny mac sy windows) Halahelo azy ve ianao?
Torohevitra 6 momba ny fiompiana marina ao amin'ny Adobe Photoshop
Ny fanangonana ireo fampihetseham-batana sy teknika tsara indrindra hampivelarana ireo sary nohetezana ao amin'ny Adobe Photoshop.
15 fampianarana tena mahaliana XNUMX ho an'ny mpamorona sary
Fanangonana taranja 15 sy fonosana fampianarana maimaimpoana ho an'ny karazana mpamorona rehetra. Halahelo azy ve ianao?
Tutorial video 10 mamaky tany hamoronana vokatra ara-javakanto
Ny fananganana fampianarana video miisa folo hianaranao ny fomba fampiharana ny vokany ara-javakanto amin'ny zavatra noforoninay.
Ahoana ny fametrahana layout ebook? Torohevitra ilaina 8 ho an'ny bilaogera
Ahoana ny fametrahana layout ebook? Ireto misy torohevitra valo izay ho mora ampiasaina hanatanterahana azy voalohany!
Tutorial video: effets pop-out
Amin'ity lesona an-tsary ity dia hianarantsika ny mamorona ny vokatra pop-out avy amin'ny fampiharana Adobe Photoshop amin'ny fomba tsotra tanteraka. Mijanona hahita an'io ve ianao?
20 tutorial 3ds Max mahatsikaiky
Fisafidianana tutorial momba ny horonantsary 20 3ds max izay tena ilaina tokoa mba hahazoana fototra tsara sy hanoritsoritana ny teknikao amin'ny maodely 3D.
Tutorial video: Low Poly Effect ao amin'ny Adobe Photoshop, mora sy haingana
Amin'ity lesona an-tsary ity dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mampihatra ny effet Low poly avy amin'ny fampiharana photoshop adobe amin'ny fomba tsotra sy mahomby.
Tutorial video: effets charcoal amin'ny Adobe Photoshop + fonosana borosy maimaim-poana
Amin'ity lesona an-tsary ity dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mampihatra vokatra arina avy amin'ny Adobe Photoshop amin'ny alàlan'ny fonosana borosy maimaimpoana.
Ny fampifangaroana ireo lesona tonga lafatra amin'ny fampiroboroboana ny asa fanodinana sary amin'ny endrika Steampunk madio indrindra. Sahy manao izany ve ianao?
Fampianarana horonan-tsary: ​​Torohevitra hanomezana kalitao ny saripika sary ao amin'ny Photoshop
Amin'ity horonantsary androany ity dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mampihatra fanitsiana sy vokatra sasany hahazoana valiny avo lenta amin'ny saripika fakantsika.
Tutorial amin'ny horonan-tsary: ​​effets exposure Double in Adobe Photoshop
Amin'ity lesona an-tsary ity dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mamorona ny fiatraikany indroa amin'ny fomba mora sy amin'ny valiny matihanina.
Fampianarana horonan-tsary 100 ilaina ho an'ny mpamorona (IV)
Fanambarana fampianarana video miisa 100 tena atolotra ho an'ny mpamorona endrika sy kanto sary Manaraka anay amin'ny Youtube!
Lahatsary momba ny horonan-tsary: ​​Famerenana sary momba ny sary Beta miaraka amin'ny Precip Crop
Fampianarana voalohany amin'ny teny Espaniola ho an'ny Affinity Photo Beta. Fanetezana volo mazava tsara amin'ny fomba tsotra sy matihanina.
Fampianarana video mahaliana 100 ho an'ny mpamorona (III)
Fanambarana fampianarana video miisa 100 ilaina ho an'ny mpamorona sy ny mpanakanto sary.
Ahoana ny fanoratana sy fandokoana ny sarinay amin'ny Adobe